TholaWeb - Izinkampani
Izinsizakalo Zedijithali zokuqinisa Ibhizinisi
I-Incubator yeWebhu enhle kakhulu yeBhizinisi - Ochwepheshe - Qala
I-TrovaWeb isisishisi esifanelekile se izinsiza zewebhu ngephothifoliyo ye imikhiqizo yedijithali lokho kuqinisekisa isilinganiso Ukubonakala amathuluzi aku-inthanethi nawokubalulekile ukukhuthaza owakho Business.
Ku Izinkampani oyikhethayo, imele ophelele Umbukiso Wemultimedia Obonakalayo lapho ukwethula eyakho ngobuhle futhi efanele imisebenzi, imikhiqizo, izinsizakalo, hhayi ezinkulungwaneni zabasebenzisi nezivakashi ze-portal yethu. Esethu kwesitoloeqinisweni, bafinyelela kubo bonke abacwaninga ngakho Injini yokusesha.
Ukuba khona nokubonakala kuGoogle:
indlela esheshayo yokuphindaphinda oxhumana nabo
Cwaninga Injini yokusesha futhi ikakhulukazi ku -Google manje sekuwumkhuba osabalele phakathi kwabathengi. Vele, akwanele ukutholakala: kumele futhi uzinikeze lapho okusemandleni akho. Zazise ngendlela evusa amadlingozi, ethokozisayo nethembekile -Google, nge isethulo esicacile nenhle evumela iqiniso lakho ngokoqobo, kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokucindezela abasebenzisi ukuthi bathinte inkampani, ngemuva kokuthola. Okokuqala, sizoqiniseka ukuthi bakuthola kalula ukubonga ukubonakala ukuthi sizokwazi ukunikela okwakho kwesitolo. Futhi-ke, sizohlomisa Umbukiso wabo bonke amathuluzi multimedia isebenza kangcono ukwenza ukuxhumana nabasebenzisi.
Ukubaluleka kwesimo Sokuzula
Ukuba ne iwebhusayithi yenkampani ngqo angamelela a into yokuguqula kuphela uma indawo yakhelwe kahle futhi yahlelwa. Isayithi liwusizo kuphela uma lingahlakazeki kokuqala Isimo Sokuzula. Ngokwesisekelo sazo zonke lezi zivivinyo nokukhuthaza ukuxhumana phakathi kokuhlinzekwa kanye nokufunwa, isinyathelo se TholaWeb.net ingosi, esanda kuchuma nezinye izinsiza eziningi.
TholaWeb ye Izinkampani kuvela kuwo wonke amaphuzu wokubuka okulusizo noma kulabo asebenawo iwebhusayithi, ngoba inegalelo elikhulu ekwenzeni kwaziwe futhi kwahanjelwa futhi ngaphezu kwakho konke kwakhiwa ngendlela efanelekile Izixhumanisi ezingemuva sibonga abaningi izindawo ezihlanganisiwe.
ITrovaWeb ilungele bonke labo Izinkampani o professionals badinga Ukubonakala, kepha abanayo eyabo okwamanje iwebhusayithi ngenxa yesabelomali esilinganiselwe noma ukuntuleka kwesikhathi.
Kunezikhathi lapho ukuvakashela iwebhusayithi yenkampani ngqo kungabonisa into yokuguqulwa kwe-NON ngqo ngoba ingahlakazeka ekuqaleni Isimo Sokuzula. Ngokwesisekelo sakho konke lokhu kuhlola nokwenza lula ukuxhumana phakathi kokuphakelwa kanye nokufunwayo, isinyathelo se-TrovaWeb.net portal sazalwa ngoSepthemba 2012, sisanda kunothiswa neminye imisebenzi eminingi.
ITrovaWeb nge-la Imprese ivela kuzo zonke izindlela zokubheka inzuzo nakulabo asebevele benayo iwebhusayithi, ngoba ibamba iqhaza elikhulu ekwenzeni yaziwe futhi ivakashelwe futhi ngaphezu kwakho konke ukwakhiwa okulungile kwe-Back Link ngenxa yezinsizakalo ezahlukahlukene ezixhunyiwe njenge: Amakhuphoni - Izimemezelo - Imicimbi - Ukubuyekezwa - I-Ecommerce - Izithombe - Amavidiyo.
I-FindWeb ifaneleka kakhulu kuzo zonke lezo zinkampani - Ochwepheshe - Abadwebi abadinga ukubonakala ukuthi baxhumane nabo kodwa okwamanje abanayo iwebhusayithi yabo ngenxa yezabelomali ezinqunyelwe noma ukungabi nesikhathi.
Ochwepheshe Bezokuxhumana Kwedijithali ekusebenzeni kwebhizinisi lakho
Iqembu I-TrovaWeb unakekela konke: kusuka kumklamo Wokubukeza esifundweni semifanekiso se-Logo, ukuze wakhe okuncane inkundla yokuxhumana elicwengekileyo, eliseduze futhi eliqondile, elinezifiso zonke amathuluzi okuthengisa, okungavumela ukuthi noma isitolo esincane noma ingcweti ibe nesifanele ukuxhumana nabasebenzisi. Futhi ngaphezu kwakho konke okuvumela wonke umuntu ukuthi athuthukise okwakhe Business nakuwebhu, ukuncintisana ekulinganiseni okulinganayo yize namabhizinisi amakhulu anezinsiza ezikhona.
Ngaphezu kwalokho, sibonga ukuhlanganiswa kwakamuva kwe I-Club TrovaWeb, futhi sinikeza ipulatifomu Ukukwabelana Komphakathi enikeza ithuba lokushicilela ngokungenamkhawulo isithombe, ividiyo, kukhangisiwe, amaphromoshini, ngisho, ucwaningo nokunye okuningi. The Izinkampani abajoyina umjikelezo weTrovaWeb bazokwazi ukukhuthaza imikhiqizo nezinsizakalo zabo, kanye nezinhlelo ze ukugcina amakhasimende. ke Club kuzokuvumela ukuba ube nobudlelwano nezinye izinkampani nabasebenzisi ababhalisiwe, ukwandisa oxhumana nabo exponentially.
Owethu Ukwabelana Komphakathi Ithuluzi elilula nelisheshayo ukugcinwa yamakhasimende. Futhi ngamandla ayo, ihlanganisa futhi yandisa i- ukubonakala ukuthi uzovele ubonge eyethu kwesitolo.